HOTEL KU YAAL MAALI OO MALEESHIYO DAD KU AFDUUBTEEN MAANTA – RadioQandala.com
HOTEL KU YAAL MAALI OO MALEESHIYO DAD KU AFDUUBTEEN MAANTA
Posted on 20 November, 2015 by RadioQandala
Dablay ayaa weerartay Huteel caalami ah oo ku yaalla caasimadda Bamako ee dalka Mali, waxaana lagu soo warramayaa in ay afduubteen 140-qof oo hoteelka degganaa iyo 30-qof oo ka shaqeynayay. Halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay.
Image caption mid kamid ah dadka la soo furtay
16:41 SGA: Dadka huteelka lagu haysto waxaa kamid ah 12 ka tirsan shaqaalaha hutelka
16:37 SGA: ciidamo gaar ah oo Maraykanka ka socdo ayaa gacan siinaya kuwa Mali ee la dagaalamaya dablayda gashay huteelka
Image caption Ciidamada Faransiiska ayaa ka hor istaagay kooxaha islaamiyiinta oo doonayay in ay dalka al wareegaaan laba sano ka hor.
16: 32 SGA: 80 qof oo ku jirtay huteelka ayaa soo baxsatay, balse kuwa haysto dhalashada Hindiya, France iyo Shiinaha ayaa wali la haystaa.
16:30 SGA: Ciidamada Mali ay xoog ku galay huteelka oo 100 qof ka badan lagu haysto.
Image caption Ciidama gaar oo ku sugan afaafka hore ee huteelka Radisson Blu,
16:25: Huteelka Radisson Blu, ayaa shaaciyay tilifoon qaraabada dadka ku jiray huteelka ay soo wici karaan.
16:22 SGA: Telefishinka Shiinaha ayaa ku waramay in afar qof oo u dhashay dalkaasi ay ka soo baxsadeen huteelka.
16:07 SGA: Illaa iyo hadda waxaan ognahay
Weeararka waxa uu billawday subaxnimadii, iaydoor ag hubaysan ay xoog ku galeen huteelka.
Tirada dablayda ma cadda, wararka qaar waxa ay sheegayaan in ay ahaayeen 13
140 qof oo huteelka daganaa ay afduub ku haystaan
30 qof ayaa laga soo badbaadiyay oo ay ku jiraan dad haysto dhalashada dalalka Farnsiiska, Turkiga, Shiinaha iyo Hidniya.
03:53 SGA: Dawladda Faransiiska ayaa sheegtay in cutub ka tirsan ciidamada gaarka ee la dagaalanka argagixisada ay ka tageen Paris oo ay ku sii wajahanyihiin caasimada Mali ee Bamako halkaasoo dablay ay galeen huteel caalami ah oo magaaladaasi ku yaalla.
Image caption Qaar kamid ah dadka ka baxsaday huteelka
Image caption Saraakiisha ammaanka Mali oo gaaray Huateelka .
KA SOO XIGTAY BBC : http://www.bbc.com/somali/war/2015/11/151120_mali_live_page
« Daawo : Guddiga Jubbaland : ”Kenya kuma xadgudbin Xuduuda Soomaaliya”
Maandeeq Reciever / Router ma Doonaysaa in aad DAAWATO, Kanaalo cusub oo Af-Soomaali ah Sida PL-TV iyo Live Sports . Sverige TV1, TV2, TV3 – Norge TV iyo Dansk TV sida TV2, TV3 iyo tv3+ iyo DR1 DR2 DR3 .. »